Ukuzinza - Foton Motor Group Co., Ltd.
I-FOTON inandipha izihloko zeshishini lokuqala lemoto e-China elisebenza nge-R & D yebhasi enikwe amandla aluhlaza, umenzi wokuqala webhasi enikwe amandla yi-hydrogen fuel kunye neshishini lemoto elineyona mileage yokusebenza inde yesithuthi esinye emhlabeni.
IMVELISO ENTSHA YAMANDLA
Lonke uthotho lwezithuthi zentengiso, kubandakanya imoto yabakhweli, ibhasi, iloli kunye ne-SPV. Iibhasi ze-AUV ezisusela kwi-5.9m ukuya kwi-18m zikhuselekile, zithembekile kwaye ziluhlaza izisombululo zothutho lwabakhweli, ukuhamba nokundwendwela. Ukuthengiswa kwezithuthi eziluhlaza kubekwe kwindawo yokuqala kwishishini iminyaka ilandelelana. Ngomhla ka-Meyi ka-2016, i-FOTON iphumelele i-odolo yeebhasi ezili-100 ezixhaswe yi-hydrogen cell cell, eyona ininzi emhlabeni.
I-FOTON iyakwazi ukwenza i-R & D yeetekhnoloji ye-8 engundoqo yesithuthi esitsha samandla kubandakanya ukudityaniswa kwe-powertrain, ukupakisha ibhetri, ulawulo lweemoto kunye nesoftware yolawulo lwezithuthi kwaye ifake isicelo samalungelo awodwa omenzi wechiza ayi-1,032 kwaye ingabanini beetekhnoloji ezingaphezulu kwe-70%. I-FOTON iphuhlise ngempumelelo isilawuli sezithuthi ezingama-32, inkqubo yolawulo lwebhetri kunye nenkqubo yolawulo lweemoto, ezisetyenzisiweyo kwiimveliso ezahlukeneyo kubandakanya ibhasi yamandla amatsha kunye nezithuthi zokuphuma. Iminyaka ye-R & D ezimeleyo yenza ukuba i-FOTON ibe nobuchwephesha bobuchwephesha bebhetri, iimoto kunye nenkqubo yolawulo lwe-elektroniki ukuhlangabezana neemfuno zokukhawulezisa, ukunyuka, ukuhamba ngenqanawa kunye nexesha lokutshaja.
I-FOTON ityale imali engaphezulu kwe-RMB 23 yezigidigidi kwaye yakha izityalo zangoku ezikumgangatho wehlabathi kunye neendlela zemveliso ezizenzekelayo kangangeminyaka emi-4 ngokusekwe kwimbono yokungabikho, akukho kunxibelelana kunye nokuzenzekelayo ngokuhlaziya iteknoloji yokungenisa elizenzekelayo, eyidijithali kunye nengqondo.
Imigca yemveliso ezenzekelayo
Umgca wokubhabha irobhothi
Umgangatho wemveliso yeebhasi ze-13.7m
Umgca welding oluzenzekelayo
Umgca wendibano yeRobot